people Nepal » प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण त्रिवि अस्पतालकै डा. प्रेमराज ज्ञवालीको टिमले गर्ने प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण त्रिवि अस्पतालकै डा. प्रेमराज ज्ञवालीको टिमले गर्ने – people Nepal
प्रधानमन्त्रीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण त्रिवि अस्पतालकै डा. प्रेमराज ज्ञवालीको टिमले गर्ने
Posted on March 2, 2020 by Durga Panta
फागुन १९, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बुधबार मिर्गौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । मिगौला प्रत्यरोपणका लागि प्रधानमन्त्री सोमबार अस्पताल भर्ना हुदैछन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै युरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट सर्जन प्रा.डा. प्रेमराज ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले उनको मिगौला प्रत्यरोपण गर्ने भएको छ । युरोलोजी डिपार्टमेण्टका नियमित प्रत्यारोपण गर्ने शिक्षण अस्पतालकै अन्य चार सर्जन पनि टोलीमा सहभागी हुनेछन्।
प्रत्यारोपणमा १२ वर्ष अघि प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपण गरेका भारतस्थित अपोलो अस्पतालका एक डाक्टरपनि ल्याउने तयारी भएको अस्पताल श्रोतको भनाई छ । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यारोपणमा नेपाली डाक्टरहरुकै सहभागिता रहने जनाइएपनि विदेशी डाक्टर संलग्नताको विषयको टुंगो भने सोमबार दिउँसो बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने डाक्टर ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
डाक्टर ज्ञवालीका अनुसार सुरु गरेको ३ देखि ५ घण्टामा प्रत्यारोपण सकिन्छ। प्रत्यारोपणपछि बिरामीको अवस्था हेरेर अस्पतालमा राखिन्छ।
१२ वर्षअघि पहिलो प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीले गत कात्तिक महिनादेखि नियमित डायलाइसिस गराउँदै आएका छन् ।